सेयर बजारमा साँच्चिकै ‘सेल’ लागेको हो ? | NewsKarobar
गृहपृष्ठ सेयर बजारमा साँच्चिकै ‘सेल’ लागेको हो ?
सेयर बजारमा साँच्चिकै ‘सेल’ लागेको हो ?
लगानी गर्नु सामान्य छ तर सजिलो भने छैन । – वारेन बफेट
कममा किन, बढीमा बेच । जब सडकमा रगताम्ये हुन्छ, अनि बजारमा गएर सेयर किन । – जेसी लाइभमोर
बफेटले भनेझैं सेयर बजारमा लगानी गर्नु सामान्य छ । ब्रोकरकहाँ जानुहोस् । खाता खोल्नुहोस् । पैसा दिनुहोस् । किन्दे भन्नुहोस्, किनिदिन्छ । बेच्दे भन्नुहोस्, बेचिदिन्छ । अहिले त अनलाइन कारोबार पनि सुरु भएको छ । खातामा पैसा सार्नुहोस् । मन लागेको किन्नुहोस् । सामान्य छ । तर, सेयरमा पैसा बनाउन त्यति सजिलो भने छैन । कसैले पैसा बनाएको देखेका भरमा पैसा लगाएर सेयर बजारमा पैसा बन्ने अवस्था छैन । बैंकको बचत झिकेर सेयरमा लगाउन वा भएको सेयर बेच्न पनि हिम्मत चाहिन्छ । हरेकपटक जोखिम उठाउनुपर्छ । बजार सधैं हाम्रो काँधमा काँध थापेर हिँड्ने मित्रजस्तो बन्न सक्दैन । किनेपछि घटिदिन्छ । बेचेपछि बढी दिन्छ । बजार सँगै दौडिइरहेको देखिन्छ तर वास्तवमा बजार सँगै दौडिरहेको नभई लखेटिइरहेको महसुस हुन्छ ।
यस्तै, जेसी लाइभमोरले भनेझैं कममा किन बढीमा बेच । नाफा र व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो सिद्धान्त नै यही हो । तर, कममा किन्नका लागि कम कुन हो बढी कुन हो वा कतिबेला हो छुट्याउन त्यति सजिलो पनि छैन । कम र बढी चिन्नका लागि विश्लेषणका औजार (समीकरण)हरु विकास भएका छन् तर त्यसको प्रयोग गर्नका लागि हामीसँग समय भएर पनि जाँगर हुँदैन । यस्तै, जेसीले भनेको अर्को वाक्य सडक रगताम्ये भएका बेला सेयर किन । सडकमा रगताम्ये भएको क्षण त्यो हो, जुनबेला बजारमा डर र त्रास व्याप्त हुन्छ र नोक्सानको पीडाले मानिस चिच्याइरहेका हुन्छन् । केही समयअघि हामीले यस्तै चिच्याहट देखिरहेका थियौं । अहिले त्यति सुनिएको छैन । के त्यो चिच्याहट सकियो ? वा अझै बाँकी छ । त्यसको मूल्यांकन गरेर अवसर छोप्ने बेला आएको हो कि ?
सामाजिक सञ्जालमा कुन कम्पनीको सेयर किन्दा ठीक भनेर प्रश्न राख्नु भनेको अब कुनमा पैसा राखौं भनेर लंगुर बुर्जा खेल्न सँगै बसेको अर्को साथीलाई सोधेजस्तो मात्र हो । यस्ता प्रश्नले अवश्य पनि सल्लाह दिनेलाई मनोरञ्जन देला तर सल्लाह लिनेलाई राम्रो प्रतिफल दिनेवाला छैन । यसप्रकारका लगानी निर्णयले अल्पकाल वा दीर्घकालमा राम्रो नतिजा अवश्य निस्कने छैन । जसका लागि बजार वा कम्पनीको वास्तविक अवस्थाको परीक्षण गर्नु जरुरी छ ।
केही वर्षअघिको सेयरको मूल्यसँग अहिले तुलना गर्दा बजारमा सेयरको सेल लागेको हो कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ । के बजारमा साँच्चिकै सेल लागेको हो वा सयको माललाई दुई सय बनाएर पसलेले ५० प्रतिशतको डिस्काउन्टको ट्याग टाँसेर ग्राहक तान्न खोजेको जस्तोमात्र हो ? त्यो पनि छुट्याउनु छ । केही वर्षअघि ८ सय रुपैयाँमा किनबेच भएको सेयर अहिले ३ सयमा किन बेच भइरहेको छ । यसबीचमा धेरै हकप्रद र बोनसको वर्षा पनि भएको छ । के साँच्चै यो सेल लागेको हो वा वास्तविक मूल्य नै यस्तै हो । यो पनि परीक्षण गर्ने बेला हो जस्तो मलाई लाग्छ । यी कुराहरु हामीले बिर्सेर कतै सामाजिक सञ्जाल र बग्रेल्ती खुलेका अनलाइन पत्रिकाहरुका फेन्सी र रोमान्टिक समाचार, स्टाटस र कमेन्टका पछि मात्र दौडेर कान नछामी कागको पछि त कुदेका छैनौं ? अब कान पनि छामौं । कान छाम्नका लागि कम्पनीका केही तथ्यांकहरुमाथि आँखा पुर्याउनुपर्छ । जसका कारण भविष्यमा विगतलाई हेरेर पश्चाताप गर्न नपरोस् । जस्तो कम्पनीका पछिल्ला वार्षिक वा त्रैमासिक प्रतिवेदनबाट केही तथ्यांक लिएर केही सामान्य समीकरण प्रयोग गरी वा पहिल्यै गणना गरिएका तथ्यांकका आधारमा सेयरको मूल्यको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ । जसको विश्लेषणका लागि सेयरको आधारभूत विश्लेषण किताब सहयोगी बन्न पनि सक्छ ।
यस्ता अनुपातमा मूल्य आम्दानी अनुपात एक हो । कम्पनीको अहिलेको बजार मूल्यलाई तत्कालको प्रतिसेयर आम्दानी (अर्निङ पर सेयर)ले भाग गरेर यसको गणना गर्न सकिन्छ । यो अनुपात १० र त्योभन्दा कम आएमा वा भएमा सेयर सस्तो भएको मान्न सक्छौं । २०६० र २०६७ तिर सेयर बजार बियरिस ट्रेन्डको अन्तिम अवस्थामा थियो, जुनबेला राम्रा भनिएका बैंकका मूल्य आम्दानी अनुपात १० र त्योभन्दा कम पुगेका थिए । यस्तै, अर्को महत्वपूर्ण तथ्यांक कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ (बुक भ्यालु) हो । प्रतिसेयर नेटवर्थ तत्काल कम्पनी बन्द गर्दा सबै ऋण तिरेर सेयरधनीले कम्पनीबाट फिर्ता पाउने पैसाको हिसाब पनि हो । यसले कम्पनीको वास्तविक भ्यालुलाई पनि दर्शाउछ । भ्यालु र मूल्य (प्राइस) मा फरक छ । भ्यालु व्यवसायले सिर्जना गर्ने हो भने मूल्य बजारले निर्धारण गर्छ । सेयर बजार न्यूनतम विन्दुतर्फ पुगेका बेला कतिपय कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिसेयर नेटवर्थभन्दा कम पनि भइरहेको हुनसक्छ । यसको अर्थ, हामी कम्पनीको वास्तविक भ्यालुभन्दा पनि कममा सेयर किन्न पाइरहेका हुन सक्छौं । यस्तो अवस्था प्राय वियरिस ट्रेन्डको अन्त्यतिर हुन्छ । नोबेल पुरस्कार विजेता विलियम एफ सार्पले जर्मनी, फ्रान्स, जापान, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत र अमेरिका हरेक देशका सेयरलाई दुई भागमा विभाजन गरेर गरेको अध्ययनले हरेक देशमा भ्यालु स्टकले दिएको प्रतिफल अन्यको तुलनामा धेरै गुणाले बढी हुने गरेको पाएका थिए ।
यस्तै अर्को, सेयरको अंकित मूल्य र बजार मूल्यको तुलना पनि हो । अंकित मूल्य र बजार मूल्यको तुलना त्यति महत्वपूर्ण त छैन तर पनि कम्पनीका अन्य तथ्यांकको मूल्यांकन गरेर अंकित मूल्यभन्दा कम बजार मूल्य भएको सेयरमा लगानी गर्न सकिन्छ । यस्ता तथ्यांकहरुको तुलना र मूल्यांकनले बजारमा सेयर वास्तवमै सस्तो भएका छन वा अझै पनि महँगो छन् भन्ने छुट्याउन सहयोग पुग्नेछ । मूल्य घटेरमात्र सेयर सस्तो बन्दैन । मूल्य धेरै देख्दैमा त्यसलाई महँगो भनि हाल्न सकिँदैन । केही समय निकालेर यस्ता तथ्यांक केलायौं र लगानी गर्यौं भने सेयर बजारमा पैसा बनाउन नेप्सेको साइटमा हरेक दिन मूल्य हेरेर तनाव लिन आवश्यक छैन । पैसा पनि बन्नेछ । निद्रा पनि लाग्नेछ ।
सेयर बजारमा छिर्ने उपयुक्त समय
प्रकाशित समय ११:५० बजे
पछिल्लाे - पर्वत बस दुर्घटना अपडेट : मृत्यु हुनेको संख्या ७ पुग्यो, ३१ घाइते
अघिल्लाे - कालोधनको कनेक्सन